Burcadbadeed Soomaali ah oo afduubtay markab laga leeyahay dalka Talyaaniga – Radio Daljir
Burcadbadeed Soomaali ah oo afduubtay markab laga leeyahay dalka Talyaaniga
Roma,Dec,28 -Kooxaha Burcadbadeeda xeebaha Soomaaliya ayaa waxaa ay kasoo afduubteen xeebta dalka Cuman Markab xamuul ah oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayna saarnaayeen 18 Shaqaale.
18-ka shaqaale ayaa waxa ay isugu jiraan 6 Talyaani ah,5 udhasahay dalka Ukrain iyo 7 u dhashay dalka Hindiya sida ay soo bandhigeen wakaalado maxaliya oo laga leeyahay wadanka Cuman.
Kabtanka waday markab oo xiriir la sameeyay mulkiilayaha shirkadda ayaa waxaa uu u sheegay inay badqabaan dhamaan shaqaalaha markabka saaran,ayna ku jiraan gacanta kooxaha burcadbadeeda.
Markabka oo lagu magacaabo Enrico Ievoli ayaa ilaa iyo hada la ogayn goobta ay u jiheeysteen burcadbadeeda qabsaday,inkastoo wararka ay sheegayaan in la filayo markabka inuu soo gaaro xeebaha Soomaaliya oo ay burcadbadeeda ku haystaan maraakiib badan.
Wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya inay jiraan ciidamo kasocda dowladda Talyaaniga oo kusoo wajahan xeebaha Soomaaliya,si’ay gacan uga gaystaan sii daynta markabkan.
Asbuuc kahor ayaa kooxo burcad badeed Somali ah waxaa ay siidaayeen markab laga lahaa dalka Talyaaniga oo ahaa nooca shidaalka qaada kaas oo ay haysteen mudo 10 bilood ah.
Bishii October markab kale oo laga leeyahay dalka Talyaaniga ayaa Burcad badeedu kasii daayeen xeebaha Somaliya kadib markii lasiiyay lacago madaxfurasho oo ay u qabsadeen markabka.